Booliska Hong Kong oo xabsiga u taxaabay nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha Dimuqraaddiyadda - Somali
Booliska Hong Kong oo xabsiga u taxaabay nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha Dimuqraaddiyadda
Video 9 minutes 52 seconds Video 9 minutes 52 seconds9:52
Play video Qeybta labaad ee maansada iPhone 11 from BBCQeybta labaad ee maansada iPhone 11
Play video Qeybta labaad ee maansada iPhone 11 from BBC
Booliska Hong Kong ayaa xabsiga u taxaabay nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha Dimuqraaddiyadda
Maxay ka dhigan tahay in waxbarashada Gobolka Banaadir lagu wareejiyo Maamulka Gobolkaasi?
Posted at 15:12 17 Sebtembar 202115:12 17 Sebtembar 2021
Dowladda Soomaaliya: Dowladda Jabuuti ayaa xannibtay Fahad Yaasiin
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirishiid Maxamed Xaashi ayaa ka hadlay xayiraad la sheegay in Jabuuti loogu geystay la taliyaha amniga qaranka Farah Yaasiin.
Video caption: Dowladda Soomaaliya: Dowladda Jabuuti ayaa xannibtay Fahad YaasiinDowladda Soomaaliya: Dowladda Jabuuti ayaa xannibtay Fahad Yaasiin
Posted at 15:13 10 Agoosto 202015:13 10 Agoosto 2020
War deg deg ahRasaas laga maqlayo xabsiga dhexe ee Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegayaa in rasaas xooggan laga maqlayo gudaha xabsiga dhexe ee magaaladaas.
Dad ku sugan agagaarka xabsiga ayaa BBC u sheegay in dhawaaqa rasaasta ka dhaceysa gudaha xabsiga ay maqleen halka mararkood ay maqlayeen qaraxyo.
Ilaa hadda ma cadda waxa ka socda gudaha xabsiga.
Posted at 9:54 10 Agoosto 20209:54 10 Agoosto 2020
Muxuu yahay hormarka ilaa hadda laga sameeyay geedi socodka nabadda ee Afghanistan iyo caqabadaha weli hortaagan?
Posted at 8:52 10 Agoosto 20208:52 10 Agoosto 2020
Wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa nidaamka maamulka waxbarashada ee gobolka banaadir ku wareejisay maamulka gobolka banaadir.
Arrintan ayaa daba socota is-afgarad dhex maray labada dhinac, iyada oo ujeedka u weynina yahay maamul daadejin. Nidaamka federaalka ee ka jira Soomaaliya ayaa ay dhacday in dhawr jeer ay muranno ka dhashaaan waxbarashada, gaar ahaan habmaamulkeeda dawladda dhexe iyo iyo maamullada qaar.
Haddaba ku wareejintan waxbarashada Caasimadda maamulka gobolka Banaadir maxay ka dhigan tahay, waxaan su'aalahaas iyo qaar kaleba weydiinnay Maxamrd Cilmi Tooxow, oo u dhundaloola heerarka waxbarasho ee Soomaaliya waxa uu u warramay Axmed Badar.
Video caption: Maxay ka dhigan tahay in waxbarashada Gobolka Banaadir lagu wareejiyo Maamulka Gobolkaasi?Maxay ka dhigan tahay in waxbarashada Gobolka Banaadir lagu wareejiyo Maamulka Gobolkaasi?
Posted at 8:00 10 Agoosto 20208:00 10 Agoosto 2020
Qorsho Xasan ayaa ka sheekaysay safarkii dheeraa ee ay u martay abaalmarinta macalinkii ugu wanaagsanaa sanadkan magaalada Minnesota Maraykanka.
Posted at 7:56 10 Agoosto 20207:56 10 Agoosto 2020
Booliska Hong Kong ayaa xabsiga u taxaabay nin caan ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Dimuqraaddiyadda, sidoo kalena ka mid ahaa milkiilayaasha warbaahin ka howl gasho dalkaas, kaas oo lagu magacaabo Jimmy Lai.
Waxaa ninkan lagu tuhunsan yahay inuu wadashaqeyn qarsoodi ah la lahaa waddan shisheeye.
Aroornimadii hore ee maanta ayaa la xiray isaga iyo ugu yaraan lix qof oo kale, oo dhammaantood loo heysto inay ku xad gudbeen sharciga u yaalla qaranka.
Mr Lai ayaa la aaminsan yahay inuu noqonayo qofkii ugu caansanaa ee loo xiro arrimo la xiriira sharciga waddankaas.
Posted at 7:51 10 Agoosto 20207:51 10 Agoosto 2020
Kulanti wacan akhyaarta halkan nagala socotaay kusoo dhawaada tebinta tooska ah oo aan idiin kuugu soo gudbinno wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka
60 il-biriqsi: Wararka maanta ee cudurka corona
Wararka maanta ee cudurka corona oo Bushra Nuur ay ku soo koobeyso 60 il-biriqsi.
Xayawaankii ugu horeeyay oo laga helay cudurka Corona
Dalka Mareykanka waxaa cudurka Corona laga helay Shabeel.
Maxaa ka jira in dhimasho uusan sababin Corona Fayras ay aad ugu badatay Nigeria?
Dowladda Nigeria ayaa baaritaan ku sameysay caabasho ay shacabka soo gudbiyeen oo ku saabsan dhimasho aad ugu badatay dalkaas, taasoo la sheegayo inuusan sabab u ahayn Corona Fayras
Dadka shaqo ka tirista ay saameysay waxaa kale oo kamid ah madaxa guddiga caafimaadka ee Huanggang
Wararka maanta ee corona fayras - 60 il-biriqsi
Wararka maanta ee corona fayras - 60 il-biriqsi ayaa lagu soo koobayaa
Wararka ugu dambeeya ee cudurka corona oo 60 il-biriqsi lagu soo koobayo.
Soomaaliya oo kaalinta koobaad uga jirta dhanka dhimashada halka ay kaalinta labaadna uga jirto tirada kiisaska Bariga Afrika.
Guud ahaan Bariga Afrika, Soomaaliya ayaa hadda kaalinta koobaad uga jirta dhanka dhimashada halka kaalinta labaad ay uga jirto tirada kiisaska la shaaciyay.